ညီညီဇော်( မြောင်းမြ ): CyberLink AudioDirector Ultra 3.0.2030 (preactivated )
ညီညီဇော်( မြောင်းမြ )
(နည်းပညာ Blogs & Sibes Collection)
Virtual Box+VM Ware
AudioDirector's dockable video preview window lets you watch your video as you cross-check audio waveform data, so you can ensure sound effects and dialogue are timed precisely to your video.
*CyberLink AudioDirector offers full support for 7.1 channel LPCM digital audio. Other 7.1 channel audio formats may not be supported.
Complete Effects and Editing Controls
Posted by NyiNyi Zaw at 7:27 AM
I Phone အတွက်Down ရန်
I Phone Game & App
software down ရန်ဒီမှာရှာ
Filecrop.com - search and download Mediafire, Hotfile and Rapidshare files http://www.filehippo.com/
Online Radio Station.♪♫
ကျွှန်တော့်ဘလော့ကို Android Phome မှာ Down ပြီးကြည့်လို့ရပါပြီ http://www.appsgeyser.com/getwidget/nyinyizaw1994/ http://files.appsgeyser.com/nyi.apk
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး
ဒီအောက်က Linkလေး တွေကိုသွားပါ
ဘာသာရေးနှင့် ပါတ်သက်သမျှ သိရှိရန်ဒီနေရာမှာကလစ်ပါ
နည်းပညာနှင့် ပတ်သက်တာမှန်သမျှ ဖတ်ရှုရန်အတွက်ဒီနေရာမှာကလစ်ပါ
ဆော့ ဝဲလ်လေးများဒေါင်းရန် ဆော့ ဝဲလ်အကြောင်းလေးများဖတ်ရှုရန်အတွက်ဒီနေရာမှာကလစ်ပါ
သင့် ကျန်းမာရေးအတွက်မှတ်သားလေ့ လာရန် ဖတ်ရှုရန်အတွက်ဒီနေရာမှာကလစ်ပါ
Site Home Page အလှဆင်ရန်CODEများဒီနေရာမှာကလစ်ပါ
Phone နဲ့ ပါတ်သက်လို့ကုဒ်များ နံပါတ်များ လေ့ လာရန်ဒီနေရာမှာကလစ်ပါ
GMAILနှင့် ပါတ်သက်သမျှ သိရှိရန်ဒီနေရာမှာကလစ်ပါ
Gtalk နဲ့ ပါတ်သက်သမျှ သိရှိရန်ဒီနေရာမှာကလစ်ပါ
Gtalk အတွက်Photoလေးများ ရယူရန်ဒီနေရာမှာကလစ်ပါ
အသုံးဝင်သောသိထားသင့် သောဆိုဒ်လေးများ သိရှိစေရန်ဒီနေရာမှာကလစ်ပါ
တင်ထားသောသီချင်းလေးများ ကြည့် ရှုရန်ဒီနေရာမှာကလစ်ပါ
တင်ထားသောPhotoလေးများ ကြည့် ရှုရန်ဒီနေရာမှာကလစ်ပါ
MyanmarFontလေးများ ရယူရန်လေ့ လာရန်ဒီနေရာမှာကလစ်ပါ
ဗဟုသုတရသမျိုးစုံ ဖတ်ရှုရန်လေ့ လာရန်ဒီနေရာမှာကလစ်ပါ
Virus နဲ့ ပါတ်သက်သမျှ ဆော့ ဝဲလ်လေး
Software Down ရန်(နိုင်ငံခြား)
မြန်မာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ဘွဲ့ ရ ကွန်ယက်
ကဲ Shortcut နဲ့ သုံးကြမယ်ဆိုရင်တော့....
Zawgyi One ကို အင်စတောလုပ်လိုက်ပါ...
Office Ultimate 2007 ကိုတင်ပေးထားပါတယ်။
ဘာသာစကား (၂၄) မျိုး ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်
အိုင်တီ Reshare site
Simple Blog ( Technology site )
Blogger Tricks & Toolz
Kanaung Converter Software
ဘာသာစကား ၂၄ မျိုးပြောင်းနိုင်ရန် ရှင်းလင်းချက်
Blog ဆိုင်ရာ (26)
Computer Skin (6)
King Soft (6)
Android နှင့် မြန်မာ Font (75)
Cleaner ဆော့ဖ်ဝဲလ် (19)
Cyberlink Power DVD များ (1)
Digital Life ဂျာနယ် (3)
Driver Software (26)
Flash Song (5)
Internet Download Manager (93)
ISO Burner (4)
KASPERSKY KEYS KAV KIS (10)
Keygen. Serial Key (1)
Microsoft Office Activator (2)
Microsoft Office Activetor (3)
MP3 Downloader (5)
MP3 Resizer (11)
Nero Burning (5)
Online Radio Player (3)
Password Revocery (4)
Recovery Software (50)
Speed Up Window (40)
Speed Up Windoww (35)
USB Disk Security (13)
WiFi Software (11)
window7(36)
window7Activator (31)
window 8 (18)
window XP (5)
window XP Activator (5)
နည်းပညာ ဂျာနယ် (22)
ဝက်ဆိုက်ဒ် လမ်းညွှန် (15)
မြန်မာ Font များ (1)
မြန်မာ Operating System (1)
မြန်မာ နှစ်တစ်ရာ ပြက္ခဒိန် (4)
မြန်မာလို IT နည်းပညာ Ebook (42)
Android ဖုန်းအတွက် (1)
Dell Drivers (4)
Hacking T00ls (1)
Phone ဖုန်းနှင့်ဆိုင်သမျှ (26)
printer service program (24)
FIRE ELECTRICA Cursors